ငွေစက္ကူများ အကြောင်းသိထားသင့်သည့် အချက် (၁၀) ချက် - ONE DAILY MEDIA
လဲလှယ်မှုစနစ်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ငွေ၏တန်ဖိုး စတင်လာခဲ့ခြင်းကို သင်သိပါသလား။ ငွေစက္ကူများမတိုင်မှီ စပါးနှံနှင့် ဆားကဲ့သို့သော သဘာဝအတိုင်း တန်ဖိုးရှိသော သို့မဟုတ် စားသုံးနိုင်သော အရာများအား လဲလှယ်ခြင်းမှ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒင်္ဂါးများ၊ စက္ကူငွေများကဲ့သို့သော တန်ဖိုးများကို ပူးတွဲပါရှိသော ငွေကြေးများသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာသည် cryptocurrency ဖြင့် ငွေသားမရှိသောဘဏ်လုပ်ငန်းဆီသို့ ဦးတည်နေပါတယ် ။ ငွေအကြောင်း သင်မသိသေးတာတွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် သင်စိတ်ဝင်စားမယ့် ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်တွေကို စုစည်းထားပါတယ်။
A.D. 618 – 907 ခုနှစ် တန်မင်းဆက်အတွင်း ပထမဆုံး စက္ကူငွေကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒင်္ဂါးပြားများ အလွန်လေးလံလာပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးသော အရာတစ်ခု လိုအပ်လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ အများစုမှာ ပုဂ္ဂလိကမှ ထုတ်ပေးသော ခရက်ဒစ် ဘေလ်များ သို့မဟုတ် ငွေလဲမှတ်စုပုံစံဖြင့် ရှိနေပါတယိ။ ဤအလေ့အကျင့်ကို ၁၇ ရာစုတွင် ဥရောပသို့ မပျံ့နှံ့မီ နှစ်ပေါင်း 500 ကျော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ငွေစက္ကူများ ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့ရန် ရာစုနှစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစခုခန့် အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် ၁၉၅၅ တွင် တရုတ်ဟာ စီးပွားရေးထိခိုက်သွားသောကြောင့် စက္ကူငွေကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ရာစုနှစ်များစွာတိုင်အောင် ၎င်းကို ထပ်မံလက်ခံခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
2. တရုတ်နိုင်ငံမှစတင်ခဲ့သော ငွေသားပေးချေမှု
ငွေသား ဟူသော စကားလုံးကို မူလက တရုတ်နိုင်ငံ တန်မင်းဆက်မှ အသုံးပြုသော ငွေကြေးကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဝိုင်းနှင့် စတုရန်းအပေါက်များပါရှိသော ကြေးဒင်္ဂါးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Kai-yuan ဟုလည်းခေါ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသော ငွေကြေးပုံစံ နာမည်များ တဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
3. ညစ်ပတ်သော ငွေစက္ကူများ
ဤအရာသည် ငွေနှင့်ပတ်သက်သော ထင်ရှားသိသာသော်လည်း မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားသောအချက်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်၏ အညစ်ပတ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အရာများစွာကို ထိတွေ့မိသောကြောင့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးမှ အခြားတစ်ဦးသို့ ပေးပို့သောငွေများသည် ညစ်ညမ်းပြီး ပိုးမွှားများ စုပုံလာပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ငွေနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် လက်ကိုဆေးကြောပါ။
ငွေသားငွေကြေးအများစုသည် စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝါဂွမ်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ငွေကို 75% ချည် ၊ 25% ပိတ်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Ben Franklin လက်ထက်တုန်းက လူတွေက စုတ်ပြဲနေတဲ့ ငွေစက္ကူတွေကို အပ်တစ်ချောင်းနဲ့ ချည်မျှင်နဲ့ ပြုပြင်ကြပါတယ်။
5. ငွေစက္ကူပေါ်မှ မျက်နှာပုံရိပ်များ
သက်ရှိလူသား၏မျက်နှာကို ငွေတွင်ရိုက်သော ပထမဆုံးလူမှာ ရောမလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဘီစီ 44 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ထိုစဉ်က ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သော Julius Ceaser သည် စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရပြီးနောက် ရောမဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် သူ့မျက်နှာကို ရိုက်နှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် သက်ရှိလူသားတစ်ဦးပုံကို ငွေဖြင့်ရိုက်နှိပ်ခြင်းခံရသော ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောမမြို့တွင် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ငွေဟာ ဆက်စပ်နေစေသည့် စက်ဝန်းသဘောသဘာဝရှိပါတယ်။ ငွေရှာဖို့ ဘာကြောင့် ပိုက်ဆံလိုသလဲ တွေးဖူးပါသလား။ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို ငွေဖြင့်ဝယ်ရမည်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်များကို ဆင်ခြင်ပြီးနောက် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ကိုစျေးနှုန်းတစ်ခုတင်ကာ ရောင်းထုတ်ပါ။ ကုန်ကြမ်းကို ပိုက်ဆံနဲ့ မဝယ်ရင် အဲဒီပစ္စည်းကို သင့်လက်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ငွေစက္ကူကို ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက 1988 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်အုပ်စိုးမှုမှ လွတ်မြောက်ရေး ရာစုနှစ်တစ်ခုအား ဂုဏ်ပြုရန် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားမှာ 216mm x 133mm ဖြစ်ပြီး ပီဆို 100, 000 တန်သည် 2,080.90 US ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှပါတယ်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်ဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်များအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် တစ်ချိန်က ကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် အသစ်အဆန်းအဖြစ် ဒေါ်လာ ၁ သန်းတန် ငွေစက္ကူ ရိုက်နှိပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
American Politics and Policy – Money
ငွေစက္ကူတစ်ခုတွင် အနံ့သင်းသင်းရှိသည်ကို သတိပြုမိပါသလား။ ငွေစက္ကူရဲ့အနံ့က ဘယ်ကလာလဲ သိချင်ပါလား။ ငွေထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးစက္ကူအသုံးပြုမှုရှိပြီး မှင်နှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ (ငွေအတွက်သုံးသော မှင်သည် အလွန်နည်းပညာမြင့်မားပြီး ခြေရာခံနိုင်သော၊ သံလိုက်၊ အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသည်)၊ ၎င်းသည် ထူးခြားသောအနံ့ကို ရရှိစေပါတယ်။ အချို့သောရဲခွေးများအား ဤအနံ့ကိုသိရန် လေ့ကျင့်ပေးကြပါတယ်။ လေဆိပ်အများအပြားတွင် ငွေအမြောက်အမြားသယ်ဆောင်လာသော သံသယဖြစ်ဖွယ်ခရီးသွားများကို ဖမ်းဆီးရန် အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့်ခွေးများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
9. အမျိုးအစား ၁၇၀ ခန့်ရှိ‌သော ငွေကြေးတန်ဖိုးအမျိုးမျိုး
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အခုဆို အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပြီး အသုံးပြုနေတဲ့ ငွေကြေး 170 ကျော်ရှိပါတယ်။ အားလုံးမှာ မတူညီတဲ့ စျေးကွက်တန်ဖိုးတွေ ရှိကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရှိ အခြားငွေကြေးများ မည်ကဲ့သို့ ရပ်တည်နေပုံနှင့် ငွေကြေးတစ်ခု၏ ခိုင်မာမှုကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ဇင်ဘာဘွေ၏ ငွေကြေးသည် ဖောင်းပွမှု လွန်ကဲသော ကာလကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါက ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကို အဆက်မပြတ်ကျဆင်းစေတယ်။ ဇင်ဘာဘွေငွေကြေးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အဆိုးရွားဆုံး ငွေကြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သင့်လက်ထဲ ရျှိသာ ငွေစက္ကူ အချို့နှင့်ပတ်သက်သော ဤအချက်များများအ‌ကြောင်းဖတ်ရသည်မှာ သင်မသိသေးသော ဗဟုသုတများရရှိစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်ရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ?
ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖတ်ရတာ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငွေအကြောင်း သင်သိထားသည့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ ရှိရင် ပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သင့်ထံမှ မှတ်သားလိုပါတယ်။
Nov 11, 2021 One Daily Media